Miyaa la iibinayaa Arsenal? – waxaa ka jawaabay agaasimaheeda Josh Kroenke – Gool FM
Miyaa la iibinayaa Arsenal? – waxaa ka jawaabay agaasimaheeda Josh Kroenke
Ahmed Nur November 7, 2021
(London) 07 Nof 2021. Agaasimaha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Josh Kroenke ayaa sheegay inay kooxdu haatan bilaabeyso dadaal ku aaddan sidii ay ugu soo laaban lahayd tartanka horyaallada Yurub ee Champions League isagoo dhinaca kale ka jawaabay haddii kooxda la iibinayo.
Tan iyo markii uu soo if-baxay mashruucii guusha waayay ee European Super League, taageerayaasha naadiga Gunners ayaa u ole’oleynayay inay mulkiilayaasha kooxda ay wareejiyaan xukunka iyadoo mulkiilaha shirkadda Spotify ee Daniel Ek uu si cad u qeexay inuu doonayo iibsashada Arsenal.
Kroenke oo qiray inay ku qaldanaayeen go’aankii ka mid noqoshada Super League ayaa taageerayaasha Arsenal ugu qalbi qaboojiyay inuu jecelyahay la kulankooda isla markaana uu dagaal adag u gali doono sidii ay ugu soo laaban lahaayeen tartanka Champions League oo aysan sanadihii ugu dambeeyay kasoo qayb galin.
Dhinaca kale, shaqsigan ka mid ah reerka iska leh kooxda ku ciyaarta Emirates ayaa sheegay inaysan Arsena iib ahayn sidaas darteedna, bilyaneerka reer Sweden uu candhuuftiisa dib u liqo sida uu ku sheegay wareysi uu siiyay DailyMail.
Kaddib saddex xiddig oo xalay ka dhaawacmay Barcelona, tirada guud ee xiddigaha ka maqan kooxda reer Spain oo gaaray 11 ciyaaryahan
Muxuusan Philippe Coutinho u ciyaarin kulankii shalay isagoo iskululeynta bilaabay qaybtii hore ee ciyaartii ay Barcelona barbarraha la gashay Celta Vigo?